N95 Nmeputa ihe Ngwunye N95 na China - China N95 Nmeputa ihe Nkpuchi
N95 Oke nkpuchi
Nkọwa ： FFP1 / FFP2 / FFP3 Respirator Dust Mask NIOSH Disposable N95 Face Mask Na Respirator Product Aha N95 ihe nkpuchi / ffp1 mask / ffp2 mask / ffp3 mask Matures High density non-kpara akwa + akwa arụ ọrụ carbon carbon + na-eme ihe mkpuchi na-adịghị mma akwa ụcha agba ntụ, acha ọcha, ọkwa ngosipụta anụnụ anụnụ Ee Typedị Nkwupụta Nkwupụta Nkwupụta ntị nti / Nrọchi Niosh, N95 Nchedo ọkwa KN95 BFE> = 95% ngwugwu 30 pcs / igbe, igbe 10 / katọn. Oke katoonu: 66 * 29 * 30cm Ngwa ： 1 ...
Nkịtị na-emepụtagharị ihe
Oge Ndu: Otutu (Ibe) 1 - 300> 300 Est. Oge (ụbọchị) 10 Ka aga-ekwurita Njirimara ： Ọmụmụ ihe mmepụta ： Ajụjụ: Q1: have nwere nkpuchi ihu na ngwaahịa? A: Ndo, enweghị nkpuchi dị na ngwaahịa ugbu a. A haziela ụlọ ọrụ anyị maka nrụpụta site na iwu anyị site n'aka ndị ahịa anyị n'ụwa niile, ma emeela masks ka ibuga ndị ahịa ahụ nyere iwu. Q2: Enwere m ike itinye ihe nkpuchi ihu ugbu a? A: Ee, ị nwere ike .Oso a bụ otu n'ime ndị nrụpụtara ka enyere aka rụpụta gọọmentị…
N 95 Nnapụta ndochi
Umu N95 Nkpuchi
Oge Ndu: Otutu (Ibe) 1 - 300> 300 Est. Oge (ubochi) 10 Ka aga-ekwurita Njirimara ： 1. Nzipu uda mmiri 2. Mmetọ ikuku 3. Mpụga 4. Ntinye na nje 5. Ihe PM2.5, nje, nje, nje na ihe na-emebi ikuku, kpuchido ahụike! Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, na Ngwuputa ihe 2. Ngwa: ndụ ụbọchị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, SPAs, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg 3. Nchedo ọzọ ...
N95 Ntutu Respirator Nkpuchi
N95 maka umuaka
95wa Ahụ N95
Oge Ndu: Otutu (Ibe) 1 - 300> 300 Est. Oge (ụbọchị) 10 Ka aga-ekwurita Njirimara ： 1. Nkesa mmịpụta nke mmiri 2. Mmetọ ikuku 3. Mpụga 4. Ntinye nke Bekee: Ngwa Bekee: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, na Ngwuputa ihe, Nke a na-agha akwa, na -eme nri. 2. Ngwa: ndụ kwa ụbọchị, ihe omumu ụlọ ọrụ, SPAs, ụlọ ọgwụ, ụlọọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg. A: pp nonwoven, nọ n'ọrụ ...
Oge Ndu: Otutu (Ibe) 1 - 300> 300 Est. Oge (ụbọchị) 10 Ka aga-ekwurita atụmatụ Njirimara ： 1. Ntinye ihe nlele nke nje: ≥98% 2. Mpempe nhicha mma: ≥98% 3. Ntughari omimi (MM H2O CM2): <5.0 4. Agbara ọbara: 60 mmHG 5. Ntughari ire oku: CL ASS 1 6. ọkọlọtọ: ASTM 7. Asambodo: CE FDA FAQ: 1. Kedu uru ụlọ ọrụ gị? (1) Btter Ogo nke ọnụahịa dị ala Anyị na-ebunye ọnụahịa ka mma n'otu ọkwa dị mma, ma nwaa ...